श्रीमान श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नु यस्तो गल्ती, जन्मन सक्छ ‘तेस्रो लिङ्गी’ बच्चा « गोर्खाली खबर डटकम
वलिवूड टिभी जगतकि अभिनेत्री रश्मि देसाईको अहिलेसम्मकै बोल्ड फोटोशुटले त,हल्का, हेरौ केही तस्बिरमा..
काठमाडौँ । यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन, भनिन्छ मनुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन, पुरुष र महिला। तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन । जसलाई हामी ‘ट्रांसजेंडर’ अर्थात ‘तेस्रोलिङगी’ भन्छौं ।
वास्तवमा, ‘ट्रांसजेंडर’लाई पुरुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन, यस प्रकारका मानिसहरुमा महिला र पुरुष दुवैको गुण समावेश हुन्छ।
बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन। कुनै पनि बच्चा कसरी बन्छ त ‘ट्रांसजेंडर’ डाक्टरहरुका अनुसार ‘प्रेग्नेंसी’को पहिलो तीन महीनाको अवधिमा शिशुको लिंग बन्ने गर्छ।
यस्ता मानिस वााहिरबाट पुरुष देखिन्छन तर भित्रि रुपमा महिलाहरुको गुण हुन्छ, यस्तै बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन। कुनै पनि बच्चा कसरी बन्छ त ‘ट्रांसजेंडर’ ?
डाक्टरहरुका अनुसार प्रेग्नेंसीको पहिलो तीन महीनाको अवधिमा शिशुको ‘लिंग’ बन्ने गर्छ । शिशुको ‘लिंग’ निर्धारणको प्रोसेस अवधिमा यदि कुनै प्रकारको चोट, टाक्सिक खानपान, हार्मोनलको समस्याले गर्दा शिशु महिला या पुरुष बन्ने भन्दा पनि दुवैको गुण वा ‘आर्गन्स’ हुन जान्छ, त्यसैले ‘प्रेग्नेंसी’को महीना महिलाहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
शिशुहरु ‘तेस्रो लिङगी’ बन्ने गर्छन किन ?
-जेनेटिक डिसआर्डर : जेनेटिक डिसआर्डरको कारणले पनि शिशुको ‘लिंग’ निर्धारणमा असर पर्न जान्छ । (इडियोपैथिक वा अज्ञात) ‘ट्रांसजेंडर’ बच्चा जन्मीनुमा अधिकांश इडियोपैथिक हुने गर्छन अर्थात समय रहुन्जेल यिनिहरुको कारणको बारेमा थाहा पाउन सकिन्न ।
-मेडिसिन्स : ‘प्रेग्नेंसी’मा महिलाले यदि कुनै प्रकारको औषधि खाएको खण्डमा जसले गर्दा शिशुलाई नोक्सान हुन सक्छ ।
-टाक्सिक फुड : यदि ‘प्रेग्नेंसी’को समयमा गर्भवति महिलाले टाक्सिक फुड जस्तै केमिकली ट्रीटेड वा पेस्टिसाइड्स फ्रूट ९ वेजिटेबल्स खाएमा ।
– ‘गर्भपतन’को औषधि : यदि गर्भवती महिलाले डाक्टरको सल्लाह विना नै आफैले ‘गर्भपतन’को औषधिको रुपमा घरेलु औषधि प्रयोग गरेको खण्डमा ‘तेस्रोलिङगी’ बच्चा जन्मीन सक्छ।
-रुघाखोकी ज्वरो : ‘प्रेग्नेंसी’को पहिलो ३ महिनामा यदि गर्भवती महिलालाई रुघाखोकी ज्वरो आइरहेको छ र यदि उसले कुनै हेभि मेडिसिन खाएमा।
-दुर्घटना वा रोगी : ‘प्रेग्नेंसी’को पहिलो ३ महीनामा कुनै प्रकारको दुर्घटना वा रोगी भएमा शिशुको ‘आर्गन्स’लाई नोक्सान भएमा।
डाक्टरको सल्लाह विना कुनै पनि प्रकारको औषधि नखानुहोस , यहासम्म की ज्वरो र रुघाखोकीको पनि औषधी खानु हुदैन ।हेल्थी डाइट अनुसारको खानेकुरा खानुस, बाहिरको खाना सकेसम्म नखानुस। थाइराइड प्राब्लम, डायबिटीज मिर्गी जस्तो रोग भएको अवस्थामा डाक्टरको सल्लाहपछि मात्र ‘प्रेग्नेंसी’ प्लान गर्नु राम्रो हुन्छ ।
‘प्रेग्नेंसी’को पहिलो ३ महीनामा ज्वरो रुघाखोकी भएमा सीरियसली मानेर डाक्टरलाई देखाउन उत्तम मानिन्छ।’प्रेग्नेंसी’को समयमा कुनै पनि प्रकारको नशालु चिजको सेवन गर्नु हुदैन ।
स्कुटी अनि,यन्त्रित भएर प,ल्टिँदा स्वोराले सन्सार छोडिन
२४ घण्टामा ३ हजार ५९७ संक्रमित निको भए
हलिउड पप स्टार ब्रिट्नी स्पेयर धेरै महिना पछि व्याइफ्रेन्डसँग वाहिर देखिए